Qadada Krismaska ee dadka guryo la'aanta ku sugan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qadada Krismaska ee dadka guryo la'aanta ku sugan
La daabacay torsdag 17 december 2015 kl 17.02
Qadadii Krismaska ee beerta boqorka
Bushaali loogu talo-galey dadyoowga tabaaleeysan ee guryaha heysan. Sawirle: Kenadid Mohamed/ SR
Burka lagu magacaabo Luciabullar. Sawirle: Kenadid Mohamed/ SR
Beerta boqorka ee afkan iswiidhishka lagu yiraahdo Kungsträdgården ayaa maanta lagu qabtey qado sharaf ciidda krismaska oo loogu talo galey bulshada fuqurada ee hooy la’aantu ku heeysato magaalada Sweden.
Waana sannadkii afaaraad oo uu tallaabadn ku tallaabsado ururka taageerada dadyoowga tabaaleey-san ee lagu magacaabo Stadsmissionen, sida ay sheegtay Marika Hjälm Sigvall, ahna u qaablisanaha ururka ee dhanka xiriirka iyo dhaqaale ururinta.
Marika Hjälm Sigvall oo ka warrameeysay howlahaa ey maanta halkaa ku hayeen ayaa sheegtay iyada oo ka warrameeysay iney qabanqaabada kala soo qeyb galeen cuno-kariyeyaal ku caan dalka ka ah, isla-markaana si mutadawac-nimo ah uga geeysaneya cunno-karinta loogu talo galey laguna taageereyo fuqarada ku dhaqan magaalada Stockholm ee nasiibka u yeeshay iney soo gaaraan barxadda beerka boqorka ee loo yaqaanno Kungsträdgården.
- Waxaa maanta halka nagula sugan cunno-kariyeyaal aad u caan ah oo cunnada ey sameeyaan aannu halka ku iibin doonno, iyada oo dhaqaalaha aan ka hello dhammaantii ey dib u geli doonto howlaha mucaawinnada ee aannu gacanta ugu fidinno dadyoowga dhibaateey-san. Waana sannadkii afaraad ee howl middan la mid ah uu ururku ku tallaabsado, sida ay sheegtay.
Qaban-qaabada howla noocani ah ayey ka dambeeyaan iyada oo lagu xuseyo ciidda Krismas-ka ama Jul-ka lagu yiraahdo afkan iswiidhishka, iyadoona sida caadadu tahay cunnada ciiddan lagu xuso uu ka mid yahay hilibka khaansiirka. Waa sidee haddaba dadyoowga tabaaleey-san ee aan cunin hilbaha khaansiirka ama ka caagan. Su’aashaa oo aan hor dhigay Marika Hjälm Sigvall, ahna u qaablisanaha ururka ee dhanka xiriirka iyo dhaqaale ururinta ayaa. Iyadoona igu tiri: Bal ina keen aannu eegnee cunnada meesha lagu hayo:
- Marka laga yimaado roodhida uu saaran yahay hilibka khaansiir, maxaa kaloo cunno ah oo laga heli karaa. Roodhi iyo faramaajo. Burka Luci bullar lagu magacaabo, cabitaanka krismaka ee julmust iyo kaffe. Waxaa meesha yaala marka cunno kale oo la dooran karo.
Waa fikir haddaba aad ku soo talo-gasheen iney jiraan dadyoow iyagu aan khaansiirka cunin ee tabaaleey-san?
- Cunnooyin kale ayaa yaala. Waana wax aannu ku fekerno. Waxaannu maalin walba quudinnaa dadyoow fara badan kuwaasina oo ka caagan cunnada qaarkeed, sida uu sheegay wiil ka mid ah dhallin-yaradii goobtaasi ka howl-galeeysey oo roodhida iyo cabitaanka u qeeybinayey dadyoowga tabaaleey-san iyo dadyoowga iyagu u yimid sidii ey cunno goobtaasi uga iib-san lahaayeen.
Qaban-qaabada howlahan ayey sidoo kale mid yihiin sidii loo dhaqaale loogu ururin lahaa dadyoowga tabaaleey-san ee uu ururka Stadsmissionen taageerada u fidiyo. Iyadoona sida ay sheegtay Marika Hjälm Sigvall, ahna u qaablisanaha ururka ee dhanka xiriirka iyo dhaqaale ururinta xafladdii middaan la midka ahayd ee sannadkii tagay uu ka soo galey dhaqaale gaarsii-san 184 000 iyo sidoo kale in ururka loogu deeqi karo haddiyadaha ciidda krismaska ee lagu magacaabo julklapp ciddii dooneeysa, iyadoona ey jiraan dhallaan fara badan ee aan haddiyadahaa heli karin. Halka dhanka kale cunnada soo harta loogu deeqo goobaha u baahan sida Vinternatten oo kale, sida ay sheegtay Marika Hjälm Sigvall.